Omogbọala Manufacturers - China Automobile Factory & Suppliers
✭ Akụkụ plastik a bụ akụkụ bụ isi nke mkpuchi njikwa na mkpuchi njikọ mkpuchi ala.
✭Ihe eji eme ihe maka akụkụ plastik a bụ ABS fireproof Materials, Nke a bụ akụkụ plastik bụ akụkụ nke ngwaahịa na akụkụ dị mkpa. Ejikọtara ya na shea etiti na mkpụrụ ọla kọpa 6, ọ dịkwa mkpa ịgafe nnwale nkwụsị 5-mita.
✭Ihe ọkụ a ABS ruru larịị ọkwa V0, na-eme ka nchekwa na nkwụsi ike n'oge ịkwụ ụgwọ na-arụ ọrụ. A na-eji ihe nkedo efere plastik maka akụkụ plastik a. oyi na-agba ọsọ na etiti mgbe, nke a uru nwere ike ime ka dum ngwaahịa ọgwụ uniformly na-adịghị mfe oruru.
✭Nke a set of ebu ebu, anyị imewe ndụ bụ 500,000 ugboro. A na-ejizi ọla kọpa mee ka ihe edozi n'etiti ngwaahịa ndị ahụ. A na-etinye akụ ọla kọpa na ebu ma gbanye ya. Nke a na-achota na enwere ike idozi ọla kọpa na akụkụ plastik.
✭ Nke a bụ akụkụ akụkụ nchekwa akụkụ akụkụ maka Volkswagen, na-eji akwa okpomọkụ na oyi na-atụ na-eguzogide ọgwụ PA66 + 30% plastic ihe. Ọnọdụ ikuku arụ ọrụ nke akụkụ a dị n'etiti -40 na +150 degrees. Ọ na-eguzogide ihu igwe n'èzí ma na-ezute ọkọlọtọ 5085 Volkswagen.
✭ A na-eji ngwaahịa a na ọnọdụ nkwado nke akụkụ akpaaka iji mee ka akụkụ ụfọdụ nke ụgbọ ala ahụ kwụsie ike. Setdị Ebu a na-agbaso ụkpụrụ HASCO. Isi ihe bụ 1.2344 (ESR) ígwè siri ike.
✭ Ọkpụkpụ ebu ahụ dịtụ mfe, ya na ihe nrụnye abụọ Becu. Ngwaahịa bụ PA6 + 30GF, na elu kwesịrị ịbụ VDI-21. Ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke ngwaahịa achọrọ bụ +/- 0.05. Oge nnyefe ebu bụ ụbọchị 30, na usoro ntụtụ bụ 30 sekọnd. The ebu eji INCOE na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ n'ime oyi na-agba ọsọ maka sub ọnụ ụzọ. A nwalere ebu ahụ naanị ugboro abụọ, onye ahịa ya wee gwa anyị ka anyị hazie mbupụ na ụlọ ọrụ na-akpụzi ọgwụ na Germany.
✭ Anyị nwere ike ịme ụdị mkpuchi okpu agha niile dị ka ndị ahịa chọrọ, enwere ike inye nkọwapụta dabere na eserese ndị ahịa ma ọ bụ ihe nlele. anyị ebu na-ma magburu onwe ya mma na ezi uche na price.
✭ Akụkụ plastik a bụ akụkụ nke okpu igwe igwe si n'aka ndị ahịa USA. Setdị Ebu a na-agbaso ụkpụrụ HASCO. Isi ihe bụ 1.2343 (ESR) ígwè siri ike. The ebu Ọdịdị bụ dịtụ mfe, na anọ onwe ha isi inserts owuwu. Ngwaahịa ihe bụ eyi plastic ihe onwunwe, na elu kwesịrị ịbụ Polish600. Oge nnyefe ebu bụ ụbọchị 45, na usoro ntụtụ bụ 37 sekọnd. Ọdịdị nke ebu a dị mgbagwoju anya, nwee nnukwu ihe mmịfe anọ na nnukwu mbuli abụọ. The ejection adopts ọchịchọ jacking tinyere push ngọngọ ejection.
✭ The ebu ebu imewe kwesịrị ka evenly kewaa iji hụ na ngwaahịa nwere ike uniformly mma. Mee ka ngwaahịa ahụ nweta oke nkenke na ọdịdị dị elu.
✭ Ọ bụrụ na ị nwere ngwaahịa ndị yiri ya, biko nweere onwe gị ka anyị mee gị ihe. Ọdịmma anyị na ọrụ anyị kacha mma.
Car Parts akpụzi
✭ Akụkụ plastik a bụ akụkụ nke ụgbọ ala n'aka ndị ahịa France. Setdị Ebu a na-agbaso ụkpụrụ HASCO. Isi ihe bụ 1.2343 (ESR) ígwè siri ike.
✭ Ọkpụkpụ ebu ahụ dịtụ mfe, yana ihe owuwu Lift abụọ. Ngwaahịa bụ PA66 + 30GF, na elu kwesịrị-egbu maramara # 600. Ihe ebu de
oge ịba ụra bụ ụbọchị 35, na usoro ntanye bụ 32 sekọnd. A nwalere ebu ahụ naanị ugboro abụọ, onye ahịa ya wee gwa anyị ka anyị hazie mbupụ na ụlọ ọrụ na-akpụzi ọgwụ French.
✭ Usoro ntanetị nke ndị ahịa zụlitere bụ ogige ndị nwere ọtụtụ ihe site na iko fiber ma ọ bụ ihe ndị sịntetik na-eme ka mmekọrịta kacha mma na mmanụ ọkụ na carbon carbon gbazee na mmanụ. Ha na-ekwe nkwa arụmọrụ kacha elu ọbụlagodi iwebata mmanụ ọhụrụ «ogologo ndụ» mmanụ, ihe mgbakwunye, mmanụ na mmanụ na-enweghị mmanụ na mbibi ha kpatara. Ọdịdị nke usoro mgbasa ozi ọhụrụ na nke ọdịnala na-eme ka a hụ na ọ dị oke mkpa na ya mere obere ihe nfu na usoro mmanu injin.
✭ Nke a plastic akụkụ bụ akụkụ nke a Oil nzacha Plastic ccessories si a Italy ahịa. Setdị Ebu a na-agbaso ụkpụrụ HASCO. Isi ihe bụ 1.2344 (ESR) ígwè siri ike. The ebu Ọdịdị bụ dịtụ mfe, na anọ onwe ha isi inserts owuwu. Ngwaahịa bụ PA6 + 30GF, na elu kwesịrị ịbụ VDI-33. Oge nnyefe ebu bụ ụbọchị 40, na usoro ntụtụ bụ 38 sekọnd. A nwalere ebu ahụ naanị ugboro abụọ, onye ahịa ya wee gwa anyị ka anyị hazie mbupụ na ụlọ ọrụ ịkpụzi ọgwụ na Italytali.